Thenga Ukukhuthaza Izinga Elilinganisiwe Lama-Hormone Kwabesifazane Namadoda-I-Healthy Metabolism Pure DHEA Amandla amakhulu - Ukuthumela Kwamahhala & Akukho Intela | WoopShop®
Ukukhuthaza Izinga Elilinganisiwe Lama-Hormone Kwabesifazane Namadoda-I-Healthy Metabolism Pure DHEA Amandla Aphakeme
Ukukhuphula amazinga weHormone alinganisiwe Kwabesifazane Namadoda-I-Healthy Metabolism Pure DHEA Amandla amakhulu - amabhodlela ama-2 ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Inombolo Yemodeli: H1452
I-NET WT: ama-PC ayi-60
Amandla Aphezulu we-DHEA (100 MG Per Capsule): I-DHEA (dehydroepiandrosterone) iyi-hormone yemvelo ekhiqizwa yizindlala ze-adrenal. Amazinga e-DHEA aphakama eminyakeni yakho engama-20 kuya ngasekuqaleni kwama-30s. Ngaleso sikhathi, amazinga e-DHEA aqala ukwehla ngokuphawulekayo. Ifomula yethu ye-Max Strength DHEA inikeza ama-capsule angama-200 we-100mg DHEA ngebhodlela ngalinye, elingasiza ukubuyisela amazinga we-DHEA aphezulu ngokuthatha okuncane njenge-1 capsule ngosuku.
Nge-100mg ye-DHEA nge-Capsule ngayinye, ifomula yethu yenzelwe ukusiza ukubuyisela amazinga we-DHEA afanele. Ukubuyisa amazinga we-DHEA olinganiselayo kukhuthaza imetabolism enempilo ne-libido, kusiza ukugcina nokuthuthukisa amazinga wamandla, kusekela ubuchopho obuphilile nokusebenza komzimba, futhi kusekela imizwa ehambisanayo. Ukuthatha i-DHEA kungasebenza emadodeni nakwabesifazane.
Izinga le-DHEA lifinyelela kuma-20s akho sekwephuzile kuya ekuqaleni kwama-30s. Ngaleso sikhathi, amazinga e-DHEA aqala ukwehla ngokuphawulekayo. Isengezo samandla aphakeme omsoco we-DHEA sizokusiza ukuthi ubuyise amazinga we-DHEA aphakeme nge-1 capsule ngosuku. Ukubuyisa amazinga we-DHEA olinganiselayo kukhuthaza imetabolism enempilo ne-libido, kusiza ukugcina nokuthuthukisa amazinga wamandla, kusekela ubuchopho obuphilile nokusebenza komzimba, futhi kusekela imizwa ehambisanayo. *
Isiza ukubuyisa amazinga we-DHEA aphezulu *
Kungasebenza kwabesilisa nabesifazane *
I-DHEA ayikwazi ukutholakala emithonjeni yokudla *
Ikhuthaza imetabolism enempilo ne-libido *
Isiza ukuthuthukisa amazinga wamandla *
Isekela umsebenzi wokuqonda *
Usekela amasosha omzimba aphilile *
Kungasiza ngemizwa *
Qaphela: * Imiphumela echaziwe ayijwayelekile futhi izohluka ngokuya ngezici ezahlukahlukene. Imiphumela ingahluka. * Lezi zitatimende azikaze zihlolwe yi-Food and Drug Administration.
Ukuthumela Okusheshayo, Insiza Ephezulu
Mude kakhulu ... Kepha isisebenzi sezidakamizwa asizange sisasho lutho ...
Okwamanje ngizonikeza umkhawulo wokuzethemba ngize ngikuhlole bese ngibona ukuthi ayikho yini imiphumela